မုဆိုးစိုင်သင် ဓါတ်ပုံပညာများ (မှန်ဘီလူး-lens) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » မုဆိုးစိုင်သင် ဓါတ်ပုံပညာများ (မှန်ဘီလူး-lens)
မုဆိုးစိုင်သင် ဓါတ်ပုံပညာများ (မှန်ဘီလူး-lens)
Posted by မှော်ဆရာ on Dec 1, 2011 in Photography | 28 comments
မုဆိုးစိုင်သင် ဓါတ်ပုံပညာများလို့ နာမည်တတ်ရတဲ့အကြောင်းက အခုရေးပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာ ပညာရပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုတာထက် အချင်းချင်း ဖောက်သယ်ချတဲ့ သဘောလောက်ပဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရေးချင်လို့ပါ ..။နောက်တစ်ခုက ဒီပညာတွေကို တစ်ကြိမ်ထဲ တစ်ခါထဲ သင်ခဲ့ရတာမဟုတ်ပဲ ဓါတ်ပုံလောကထဲမှာ ကျင်လယ်ရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း သိလာတဲ့ အတွေ့အကြုံများဖြစ်လို့ပါ။ ဆရာစိန်သော့တို့ ဆရာလေးဂီတို့လောက် လေးနက်မှုမရှိပေမယ့် လက်သင်အဆင့် ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်များအတွက်တော့ အထောက်အကူ တစ်ခုခုတော့ပေးနှိုင်ပါလိမ့်မယ် .။ မပေးနှိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော့ရဲ့ အားနည်းချက်လို့ပဲ ပြောပါရစေ…။
၀ါသနာရှင်များအတွက် သိသင့်တဲ့ မှန်ဘီလူးအကြောင်း
ကင်မရာ မှန်ဘီလူးတွေကို သူ့မှာပါတဲ့ အကြီးချဲ့နှိုင်စွမ်း သို့ အသေးချုံ့နှိုင်စွမ်းပေါ်မူတည်ပြီး နံပါတ်တွေနဲ့ သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ပါတယ်.။
ဥပမာ 10-18 mm lens
စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်.။ အဲဒီ့ နံပါတ်တွေကို မှန်ဘီလူးမှာ ဟောသည်လို ရေးပြထားတတ်ပါတယ်..။
ဒါ 16-85mm မှန်ဘီလူးပါ
ဒါဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ရှိတာ ဘယ်လိုမှန်ဘီလူးလဲဆိုတာ သိလောက်ပါပြီ ..။
50mm ကို normal မှန်ဘီလူးလို့ မှတ်ထားပါ..။ဘာကြောင့် normal လို့ပြောရသလဲဆိုတော့ 50mm တပ်ထားတဲ့ကင်မရာနဲ့ အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုကြည့်တာနဲ့ ဒီအတိုင်းရိုးရိုးကြည့်တာ အရွယ်အစားတူတူဖြစ်လို့ပါ..။အရွယ်အစား သေးသွားခြင်း ကြီးသွားခြင်း မရှိဘူးပေါ့..။ 50mm ထက်နံပါတ်ငယ်သွားရင်တော့(ဥပမာ 18mm) အရာဝတ္ထုကငယ်သွားမယ် ။ 50mm ထက် ကြီးရင် (ဥပမာ 150mm)အရာဝတ္တုက ကြီးသွားမယ်လို့ ပြောလို့၇ပါတယ်…။ 50mm ကပုံမှန် ၊50mm ထက်ဂဏန်းငယ်ရင် ဝေးသွားမယ်..၊ 50mm ထက်ဂဏန်းကြီးရင် နီးလာမယ်လို့ဆိုလိုတာပါ.။
Normal ထက်ငယ်ရင် wide မှန်ဘီလူး ၊normal ထက်ကြီးရင် tele (zoom)မှန်ဘီလူးလို့ ခေါ်ပါတယ် ..။အောက်က ဇယားလေးကိုကြည့်လိုက်ရင် ပိုရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်.။
lens အခေါ်အဝေါ်နှင့် အသုံးဝင်ပုံ
ဒါပေမယ့် ကင်မရာဆရာ အများစုသုံးကြတာက 18-55mm ဖြစ်ပါတယ်..။Nikon ကင်မရာတွေဝယ်ရင် တွဲပါလာတတ်တဲ့အမျိုးအစားပါ..။normal-wide မှန်ဘီလူးလို့ ဆိုရမှာပေါ့နော်..။ အလှူမင်္ဂလာဆောင် ရိုက်ဖို့အဆင်ပြေပါတယ်။ကင်မရာမြင်ကွင်းထဲမှာ လူများများကာတာပေါ့..။ဒါပေမယ့် အားနည်းချက်အနေနဲ့ မျက်နှာ အနီးကပ်ပုံရိုက်ချက်တွေမှာ အဆင်မပြေပါဘူး..။ လူပုံမျက်နှာ အနီးကပ်ရိုက်မယ်ဆိုရင် လူအနားကို ကပ်မရိုက်ရပါဘူး..။ wide မှန်ဘီလူးရဲ့ သဘောတရားအရ အနီးကပ်ရိုက်ရင် မျက်နှာကြီးခုံးလာလို့ဖြစ်ပါတယ်..။ဆ၇ာတွေကတော့ Distortion ဖြစ်တယ် ဆိုကြပါတယ်..။ပုံပျက်သွားတယ်ပေါ့နော်..။ အနီးကပ်ရိုက်ချင်ရင် zoom ဆွဲရိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ ..။နောက် အများစုမေးတတ်ကြတဲ့ နောက်ဝါးဘယ်လိုရိုက်သလဲဆိုတာမျိုးက zoom ဆွဲရိုက်လို့ နောက်ဝါးဖြစ်တာပါ..။
ဒါဆိုရင် wide နဲ့ tele ကွာခြားပုံကို သိလောက်ပါပြီ ..။
wide ရော tele ရော တွဲပါတဲ့ 18-200mm မှန်ဘီလူးမျိုးဟာ အိမ်သုံးသမားတွေအတွက် သင့်တော်ကောင်း သင့်တော်ပါလိမ့်မယ်..။ဒါပေမယ့် professional ကျကျ ရိုက်ချင်တဲ့သူများဟာ အဲဒီ့မှန်ဘီလူးမျိုးကို မရွေးချယ်သင့်ပါဘူး။ မှန်ဘီလူးတစ်လုံးထဲမှာ wideရော teleေ၇ာ တွဲပါအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့အတွက် tele သီးသန့် ( သို့ ) wide သီးသန့် မှန်ဘီလူးများနဲ့ ယှဉ်ရင် ရုပ်ထွက် အနည်းငယ်ငယ်ညံ့နေတတ်ပါတယ်..။တကယ့်ဆရာကြီးများဆိုရင် အတိုးအဆုတ်လုပ်လို့မရသော (ဥပမာ 18mm only)(200mm only) များနဲ့ ရိုက်ကူးကြပါသတဲ့..။
မှော်ဆရာ စိတ်ကြိုက်ညွှန်းရမယ်ဆိုရင် 18-55mm တစ်လုံး 55-200mm တစ်လုံး ၀ယ်ယူထားမယ်ဆိုရင် အဆင်ပြေလောက်ပါတယ်..။သူ့နေရာနဲ့သူ မှန်ဘီလူးလဲတပ်ပြီး ရိုက်ကူးတာ ပိုအဆင်ပြေပါတယ်..။(လဲမတတ်ချင်ရင်တော့ ကင်မရာပါ နှစ်လုံးဝယ်ထားပေါ့..။wide တပ်ထားတာ တစ်လုံး၊tele တပ်ထားတာတစ်လုံး ၊ပိုက်ပိုက်ပေါရင် ပြောပါတယ်.၊)
ဒါတွေကို သိလို့ မှန်ဘီလူးဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ပထမတစ်ဆင့် ED ဘယ်လောက်ပါသလဲ ကြည့်ရပါမယ်..။ED ဆိုတာ “Extra-low Dispersion glass.” လို့ဆိုလိုတာပါ..။မှန်ဘီလူးတစ်လုံးဟာ မှန်ချပ်များစွာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်..။အောက်ကပုံကိုကြည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်.။ကိုယ်ရိုက်မယ့်ပုံရိပ်ဟာ မှန်ချပ်တစ်ချပ်ကို ဖြတ်တိုင်း ဖြတ်တိုင်း နဲနဲစီ ၀ါးလာပါတယ်.။မှန်ချပ်အများကြီးကို ဖြတ်သန်းပြီး ကင်မရာထဲလဲရောက်ရော quality အများကြီးကျသွားမှာပါ..။ED မှန်ချပ်ကတော့ သူ့ကို အလင်းဖြတ်သွားရင် ၀ါးမသွားပါဘူး.။ဒါကြောင့် မှန်ဘီလူးတစ်လုံးမှာ ed မှန်ချပ် များများပါလေ ကောင်းလေ.ကြည်လေပါ..။ed ဘယ်နှစ်ချပ်ပါသလဲဆိုတာ ကိုယ်ဝယ်မဲ့မှန်ဘီလူးမှာတွဲပါတဲ့ စာရွက်ကလေးမှာ ကြည့်နှိုင်ပါတယ်..။အ၀ါရောင်မှန်လေးတွေက ED မှန်ကို ဆိုလိုတာပါ..။
ဒီမှန်ဘီလူးမှာ ED 3ချပ် ပါပါတယ်..။
ဒီမှာတော့ ED7ချပ် တောင်ပါပါတယ်..။ထိပ်တန်းအဆင့်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်..။
ဒုတိယကတော့ (VR) ပါမပါ ကြည့်ပါ..။ VR ဆိုတာ (vibration reduction)လို့ဆိုလိုတာပါ..။အလွယ်ပြောရရင် လက်လှုတ်လို့ ၀ါးတာမျိုးမဖြစ်အောင် ထိမ်းပေးတဲ့ စနစ်ပေါ့ဗျာ..။VR မပါတဲ့ မှန်ဘီလူးနဲ့ VR မပါတဲ့ မှန်ဘီလူး ရုပ်ထွက်သိသိသာသာ ကွာပါတယ်..။တစ်ချို့မှန်ဘီလူးများမှာ VR စနစ် နှစ်ခုတောင် ပါပါတယ်..။ပထမတစ်ခုက လက်လှုတ်တာကို ထိမ်းတာပါ..။နောက်တစ်ခုက လူလှုပ်တာကို (ဥပမာ လှေပေါ်က ရိုက်လို့ လူပါလှုတ်နေတာမျိုး၊ ကားပေါ်က ရိုက်လို့ လူပါခုန်နေတာမျိုး)ကြောင့် ၀ါးတာကို ထိမ်းပေးတာပါ..။ ဒါမျိုးကတော့ အဆင့်မြင့် မှန်ဘီလူးများမှာမှ ပါလေ့ရှိပါတယ်.။၀ါသနာရှင်အဆင့်ကတော့ VR တစ်ဆင့်ဆို လုံလောက်ပါပြီ..။
VR ပါသော 16-85mm မှန်ဘီလူး
ဒီမှာကတော့ VR (၂) ဆင့်တောင်နော် .. အကောင်းစားကြီးပေါ့..
ကျွန်တော်က nikon သမားဆိုတော့nikon ကိုအဓိက ထားပြီးရေးပါတယ်.။nikon နဲ့ Canon ကွာခြားချက်အရ အခေါ်အဝေါ် တွေ နဲနဲပြောင်းနှိုင်ပါတယ်..။ဥပမာ VR ကို Canon မှာ IS (image stabalization )လို့ခေါ်တာမျိုးပေါ့ …။ မရှင်းတာရှိရင် ပြန်ကွန်မန်းပေးခဲ့ပါနော်..
ရွာထဲက ဆရာများ လိုတာရှိလျှင်လဲ ဖြည့်ခဲ့ပါဦး ..
လိုဒယ် လိုဒယ် …စိုင်လေးဒွေနဲ့ ညှိနေဒယ် ဆိုပီး
စိုင်လေးဒွေ တကောင်မှ မပါတာ …အလိုအပ်ဆုံးအချက်ပဲ…
စိတ်ကောက်တွားဘီ မန့်လော့ဝူး… အိပ်ပီ …၀ှား ….
( ဆြာစကားနဲ့ ပြောရရင်.. အတိတ်ပြ၊ နမိတ်ပြနေတာ………. )
ပထမ ပြောင်းကြီး…………….နောက်ပြောင်းကြီးက တစ်ဖြည်းဖြည်း ဝါးလာပြီး…စိုင်လေးတွေ ကြည်လာ (ပေါ်လာ) မယ်။
ပြောင်း……စိုင်……….ဒါဆိုရင်တော့ ဒါရိုက်တာကြီးမှော်……ပြချင်တာ…..ပေါက်သွားမယ် (သဘော)
ဟုတ်ပါ့ ဟုတ်ပါ့ … ဒါမှ ဘယ်စိုင်ကို ဘယ်ပြောင်းနဲ့ ပစ်ပါတယ် လုပ်လို့ ရမှာပေါ့ ..
ဒီတိုင်းဆို ဘယ့်နဲ့ ပြောရမလဲ
အောင်မာ အတိုင်အဖောက်ညီနေချက်များ …
ပလိုဖက်ရှင်နယ်လ် ဒါ့ပုံဆြာ ၂ယောက်…အချင်းချင်း တွက်ကပ်ပီး
တားတားတို့ ချာတိတ်ဒွေ ဘယ်လို ပညာဆည်းပူး ရပါ့….
စိုးတယ် စိုးမိတယ် စိုးထိတ်မိတယ်…
wide နဲ့zoom ရိုက်တဲ့ ပုံက wide ဆိုရင် နီးနီးလေးကပ်ရိုက်ပြီး zoom ဆိုရင် အဝေးကြီးကရိုက်လို့အနောက်ကဝါးတာလား။ တနေရာထဲကပဲ wide ကော zoom ကောရိုက်လိုက်တာလား။ အဲဒီ lens တွေ တစ်ခါမှ အသုံးဖူးဘူး။ နဲနဲဝေးတယ် ရှင်းဦး ဟီးး
wide က ၃ ပေလောက်က ရိုက်ပြီး zoom နဲ့8 ပေလောက်ကနေ ရိုက်လိုက်တာဗျ ..။ အရုပ်လေးရဲ့ အရွယ်အစားကတော့ ဓါတ်ပုံထဲမှာ တူတူပဲ ဖြစ်နေတယ်လေ ..။ဒါပေမယ့် zoom နဲ့ ရိုက်ထားတာ ပိုကြည့်လို့ ကောင်းတယ် မလား ..။
အဲဒီလိုပဲ လူတစ်ယောက်ကို မျက်နှာကြီးပဲ close up ရိုက်မယ်ဆိုရင် အနီးကပ်ပြီး wide နဲ့ရိုက်တာထက် အဝေးကနေ zoom နဲ့ ရိုက်တာ ပိုကောင်းတယ်ခင်ဗျ ..။ နောက်ဝါးလဲ ပိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် …။
အများစုက zoom ကို အဝေးကဟာတွေကို နီးအောင် ဆွဲရိုက်တဲ့ဟာလို့ပဲ သိကြလို့ပါ..။ တကယ်တမ်းက လူပုံကို လှအောင်ရိုက်ရင် သုံးတာ ပိုများပါတယ် ..။ သက်သက်မဲ့ကို အဝေးကနေ ရိုက်ကြတာပါ ..။
အဲ ဂီဂီတို့လို လူတွေဆိုရင်တော့ မော်ဒယ်လေး အနားကို အတင်းကို ကပ်ရိုက်မလား မသိ ..။
ဟိုတစ်ခါပြောဖူးတာက ကောင်မလေးကို မတ်တပ်ရိုက်ခိုင်း ၊ သူက ကြမ်းပြင်မှာ ပါးအပ်ပြီး အောက်ကပင့်ရိုက်တယ် ပြောတာပဲ …(fish eye lens နဲ့)။ မယုံရင် သူ့မေးကြည့် …
ကျနော်သာ ဂီဂီလို ကြမ်းပြင်ပေါ်အိပ်ပြီး မော့ရိုက်ရမယ်ဆိုရင် ခလုတ်နှိပ်ဘုိ့မေ့နေမှာသေချာပါတယ်။
ပြောသာပြောတာ အဲဒီ့ပုံတွေ ပညာယူချင်လို့ ပြပါဂီဂီရယ်ဆိုတော့ သူတောင်ကြည့်လို့မ၀သေးဘူးဆိုပြီး မပြဘူးဗျ …
မျက်နှာကို ရိုက်ထားတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားမသိပါဘူး ..။
ပြဇရာ လား …
နာက ပြဇရာလား …ခွီး …..
နင့် စိုင်မပြရင် နာ့စိုင်လည်း ကျိရ၀ူး မှတ်…ဟွန်း……
အဲ့မှန်ဘူးကြီးတွေ နဲ့ 
ဓါတ်ပုံဆရာ တွေ အိမ်ထောင်ကျ စောတာကိုး
Canon ဆရာတစ်ယောက်က လှမ်းမေးလို့ပါ ..။ VR စနစ်က Nikon ဆိုရင် မှန်ဘီလူးမှာ ထည့်သွင်းပါတယ်…Canon ဆိုရင်တော့ Camera Body မှာ တစ်ခါတဲ တွဲပါပါတယ်…။ အဲဒီတော့ မှန်ဘီလူးတစ်ခါ ၀ယ်တိုင်း VR ပါမပါ ကြည့်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့ …။
VR ကို Canon မှာ IS (image stabalization ) လို့ ခေါ်ပါတယ် တဲ့ ခင်ဗျား ..။( ဂီဂီ ကျေးကျေးနော်..)
ဟုတ်ဝူး အစ်ကိုရီး ……IS lens အနေနဲ့ ထွက်တာ …ဘော်ဒီမှာ ပါဝူး …
ကျုပ်တို့ ကနွန်းတွေက LENS မှာ မော်တာတပ်တာ
တော်တို့ နကွန်း တွေက ဘော်ဒီမှာ မော်တာတပ်တာ …..
typical canon lens တခု ချရေးရရင်…
Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS ပေါ့ဗျာ …..
EOS နဲ့ ပါတ်သတ်ပီး နောက်မှ သတ်သတ်ရေးပါ့မယ်
ဟေ့လူ ကပေ …ဘာ …ကင်မလာမန်းဒွေ မိန်းမရစောတာလဲ ….
နင်က နကွန်း ရှူတာဒွေဘဲ မြင်ဖူးပီး ….ဟွန့်။။။
အရှေ့ကျွန်းက ကနွန်း ရှူတာ ချောချောလှလှလေး …ဂီဂီ ….အထီးကျန် နေတာ ကို သရော်ဒယ်ပေါ့….
VR အကြောင်းတော့သိရပါပြီ၊ AF ပါတာနဲ့မပါတာ ဘာကွာသလဲ၊
နောက်ပြီး 1:3.5-5.6 G အကြောင်းလေးလဲ သေချာသိချင်ပါတယ်၊တချို့ အလုံးတွေမှာ 4.5-5.6 G ကိုတွေ့ဖူးလို့်ပါ။ အဲဒါကွာရင် ဈေးနှုန်းကွာသလား၊ Nikon, AF 55mm-200mm နဲ့ 70mm-300mm တွေရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ လက်ရှိပေါက်ဈေးလေးသိချင်ပါတယ်။ nikon ရဲ့ ရင်းဆိုက် ကအကုန်လုံး 52 ပဲလား။
AF ဆိုတာ auto focus လို့ ဆိုလိုတာပါ …။focus ကို လူကချိန်ပေးစရာမလိုပဲ အလိုလို ချိန်မယ်ပေါ့နော် ..။အခုခေတ်ကတော့ AF ကတော့ မပါမဖြစ် ဖြစ်နေပါပြီ..။
1:3.5-5.6 ဆိုတာက အကျယ်ဆုံးထားလို့ရမယ့် အပါချာ နံပါတ်တွေပါ..။ဥပမာ 18-55mm မှန်ဘီလူးမှာ 1:3.5-5.6 လို့ပြထားရင် 18mm မှာ အပါချာကို အကျယ်ဆုံး ၃.၅ အထိ ဖွင့်နှိုင်ပြီး 55mm ဆိုရင်တော့ အကျယ်ဆုံး ၅.၆ အထိပဲ ဖွင့်နှိုင်မယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ..။အပါချာ များများဖွင့်နှိုင်တဲ့ lens ဆိုရင် ပိုကောင်းပါတယ်..။
aperture ကို မှန်ဘီလူးကနေ ထိမ်းချုပ်လို့ မရတဲ့ lens အမျိုးအစားဆို G လို့ထည့်ရေးပါတယ်..။အခုနောက်ပိုင်းမှာ G Type တွေပဲများလာပါတယ်..။ဘာလို့လဲဆိုတော့ DIGITAL SLR ကင်မရာ အားလုံးလိုလိုဟာ aperture ကို ကင်မရာဘော်ဒီကနေ ထိမ်းချုပ်နှိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် G Type ကိုပဲ အသုံးများလာလို့ပါ..။
55-200mm က ကျွန်တော် သုံးနေတဲ့အမျိုးအစားဆိုရင် 4-5.6 G ED VR AF lens ပါ။ED နှစ်ချပ်ပါပါတယ်..။ပေါက်ဈေး ၂သိန်းခွဲကျော်မယ်ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်တော်က ရန်ကုန်က မဟုတ်တော့ အတိအကျကြီး မပြောနှိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါ..။
၇၀-၃၀၀ က တစ်လုံးတွေ့ဖူးပါတယ်. ။ AF တော့ ပါပါတယ်..။VR မပါပါ.။ED မပါပါ.။တစ်သိန်းကျော်ပဲ ရှိတယ် ထင်ပါတယ်..။ဒါပေမယ့် ပုံထွက်လုံးဝမကောင်းပါ..။ပိုက်ဆံ တပ်နှိုင်မယ်ဆိုရင် 70-200 ကိုညွှန်းပါရစေ…။AF_VR နှစ်ဆင့်-ED ခွန်နှစ်ချပ်တောင်ပါပါတယ် ..။အပေါ်မှာ ပါတဲ့ကောင်မျိုးပါ..။ ဈေးနှုန်းကတော့ show room မှာဆိုရင် ၂၂ သိန်း ၀န်းကျင်ရှိနှိုင်ပြီး အပြင်ဆိုင်ဆိုရင် ၁၈ သိန်း ၀န်းကျင်ရှိနှိုင်ပါတယ်..။ပုံထွက်ကတော့ စိတ်ကြိုက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..။
၀ယ်ပေးဘာလားဟင် …နကွန်း ဆြာရီး…
အစိမ်း ၂ထောင်လေးဘဲဟာ ….
၇၀-၂၀၀မမ ၂.၈အယ်လ် လေး ၁လုံးရရင်တော်ဘာဘီ….
(၂၄-၇၀မမ လေးပါ ပါရင် ပိုကောင်း ….အဟီး …)
နာတောင် လိုချင်လို စပွန်ဆာ လိုက်ရှာနေတာ..
စပွန်ဆာမမများရယ် …. ကိုယ့်ထမင်းကိုစားပြီး ပေါင်းဆိုလဲ ပေါင်းပါ့မယ်ဂျာ …
လိုချင်သမျှ မှန်ဘီလူးလေး ကင်မလာလေး ၀ယ်ပေးရင်ကျေနပ်ပါပြီ ..
ကျေးဇူး ဆရာမှော်…….55-200mm ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ၁၈ သိန်းကတော့ တခါမှ မထိုးတဲ့ ထီပေါက်မှပဲ ၀ယ်တော့မယ်။ Tamron, Sigma ဆိုတာတွေက အမျိုးအစားတွေလား၊ နောက်မှာ Nikon F လို့ ရေးထားတယ် အဲဒါတွေက၊ဈေးသက်သာတယ်နော်။
ဟုတ်ပါတယ် .. နီကွန်အတွက် ထုတ်ထားတဲ့ မှန်ဘီလူးတွေပါ …။
ဈေးသက်သာပါတယ် ..။၀ါသနာရှင်အဆင့်ဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ် ..။
ဒါပေမယ့် နီကွန် မှန်ဘီလူးအစစ်လောက် ကွာလတီမကောင်းပါဘူး.။
အဓိကက sharpeness ကျတာပါ ..။VR လဲ မပါပါဘူး။
ကျွန်တော်တောင် 18-200 Tamron တစ်လုံးဝယ်ထားပါသေးတယ်..။
တမ်မရွန်း ၁၈-၂၀၀မမ ရီးနဲ့ ဆိုပါလား …
ပြန်လာမှ ငှားရိုက်ဦးမယ် ….. ကြိုက်ရင် ပြန်ပေးဝူး ကျော်မယ် …ခစ်စ်
ကနွန်း နကွန်း ကွန်ဗားရှင်း ကစ် မ,လာခဲ့မယ်…
ဆြာမှော် .. ED ဘယ်နှစ်ချပ်ဆိုတာ မှန်ဘီလူးပေါ် မှာ မပါဘဲ စာရွက်မှာဘဲ ပါတာ လား ။
ဆြာမှော် ပြထားတဲ့ မှန်ဘီလူးမှာ ED တွေ့ပြီး သူ့ ရှေ့ G က သင်္ကေတ လား ။
1:3.5-5.6 G ED ဆိုတာတွေ့လို့ အဲ့ဒီ G က ဘာကို ညွန်းတာလဲဗျ။
တစ်ချပ်ထဲ ပါရင်လဲ ED ပဲ ရေးတာပါပဲ ..။
ED ဘယ်နှစ်ချပ်ဆိုတာ မှန်ဘီလူးနဲ့ တွဲပါတဲ့ စာရွက်ပေါ်မှာကြည့်မှ သေသေချာချာ သိမှာပါ ..။
G အကြောင်းကတော့ small cat ကိုဖြေပေးထားတာလေး ကြည့်လိုက်ပါနော….
တပည့် ဂီဂီ လေး…
စောင့်ဖတ် ပညာယူရင်း နဲ့ filter အကြောင်းလေး .. ရေးပေးပါလား ..landscape သမားတွေ အတွက် .. ပညာ မျှ ပါဦး ဗျာ … မီးပန်း အကြောင်း ရေးထားတာ တော့ ရှယ်ပဲဗျာ ..ရှင်းထှာ (ဟီး…) အဲဒါ စမ်းဖို့ လို့ နောက် တနှစ် တောင်ကြီး မီးပုံးပျံ ပွဲ .. ကို အားခဲထားတယ်။ adapter နဲ့ filter ၀ယ်မလို့ စုံစမ်း နေတာ.. ပို အသေးစိတ်ရှင်းရှင်း လင်းလင်း သိချင်လို့ .. filter အကြောင်း ရေးပါ ဗျိုး …ကြုံတဲ့သူ ရေးပေးပါ .. ရွာထဲက pro တွေ အကုန်လုံးကို ညွှန်းပါတယ်။ နောက် မှ ကျွန်တော် လက်တည့် စမ်း ထားတဲ့ ပုံ တွေ တင်ဦးမယ်..
သိဝူးဗျ. .. ကျုပ်က အရူးချေးပန်း လျောက်ရိုက်တာ …
ဆြာမှော်တို့ ..ဆြာဘဘ သောစ့် တို့ကို ပူဆာ …
သည်ဘဲတွေက အားရီး လျိုတာ …..
အိုယဆုမိ= 8 p
မသိဘူး မသိဘူုးနဲ့ ပြောလိုက်ရင် နေရာတကာ သူပဲ ..
မောင်ဂီ့ကိုသာ ရေးခိုင်း သူ့ဆီမှာfilter တွေဆိုတာ အထပ်လိုက် …
ရှိပါဝူးဂျာ ..ဖစ်လတာတွေ ..၀ယ်နိုင်ပါဝူး …..မွဲနေလို့ ….
သဂျီး က လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုတောင် …
ဘယ်လို သုံးရမှန်း မသိလို့ …. သင်ပေးပါဦး ဦးဦးတို့ရယ် နော်….